Sarimihetsika tsara indrindra 50 hijerena ny Netflix (havaozina 2020) - Fialam-Boly
Sarimihetsika tsara indrindra 50 hijerena an'i Netflix
Netflix dia manana tahirin-tsarimihetsika an'arivony marobe amin'ny sehatra fandefasana azy. Indraindray ny serivisy dia mety ho marim-pototra miaraka amin'ny tolo-keviny, saingy, matetika dia mbola sarotra ny mahita zavatra safidinao ao anatin'ny lisitry ny fanangonana.
Noho izany, nanamora kokoa anao izahay tamin'ny alàlan'ny lisitra ireo sarimihetsika tsara indrindra 50 amin'ny Netflix amin'ny alàlan'ny katalaogin'i Netflix.
Sarimihetsika tsara jerena amin'ny Netflix:
1. Ny làlana (2019)
El Camino dia mampiseho an'i Jesse Pinkman (Aaron Paul), izay mpianatry ny mpanjaka meth Walter White (Bryan Cranston) teo aloha, naka ny toerana nilaozan'ilay seho azy. Mandositra ny fitambaran'olona nitazomana azy izy. Ankehitriny, mandositra ny lalàna miaraka amin'ny basy izy.
2. Baby Baby an-tapitrisany (2004)
Clint Eastwood (izay mitantana koa) dia mitana ny andraikitr'i Frankie Dunn, izay mpanazatra ady totohondry taloha ary nanokana ny fiainany manontolo tamin'ny peratra tamin'ny fandaniam-bola sy ny fifanakalozana zavatra hafa rehetra tamin'ny fiainany. Rehefa miditra amin'ny gym i Maggie Fitzgerald te-hanana mpanazatra, dia nandà i Frankie satria mieritreritra izy fa tsy mendrika mpanao ady totohondry ny ankamaroan'ny vehivavy ary efa antitra loatra koa i Fitzgerald amin'ny taona 31. Nefa, eto dia tsy handray valiny izy. Tsy ela dia nampiofana azy ho mpiady mahery i Frankie. Ny roa taty aoriana dia namorona fatoram-pihetseham-po.
3. Ny fahanginan'ny zanak'ondry (1991)
Ny toetran'i Jodie Foster dia fantatra amin'ny anarana hoe Clarice Starling, izay mpianatra ambony ao amin'ny akademia fiofanana ao amin'ny FBI. Ny famakafakana an-tsakany sy an-davany momba ny mpamono olona serial dia nahatonga azy hanendry olona iray hamono olona mpamono olona ratsy toetra antsoina hoe Buffalo Bill. Mino izy fa mpamono olona hafa, Dr. Hannibal Lecter, dia mety ho anisan'ny raharaha, nilaza taminy ny mpiandraikitra an'i Clarice fa manontany an'i Lecter ihany koa izy. Lecter dia tsy mahalala na inona na inona momba ny Buffalo Bill, fa ny fampahalalana azy dia tonga amin'ny vidiny. Vetivety dia namantatra an'i Clarice i Lecter ary nanararaotra ny fahatsiarovany hitadiavana ny làlan'ny fahalalahana.
Jurassic Park dia iray amin'ireo sarimihetsika tsara indrindra natao hatramin'izao. Ity sary mihetsika manaitaitra momba ny hetsika ity momba ny lehilahy manankarena iray izay tsy afaka nanohitra ny filalaovana Andriamanitra tamin'ny famerenana ireo dinôzôro tany amin'ny nosy Costa Rican iray lavitra dia mitsoka saina ary mahafinaritra sy horohoro be ho an'ny fianakaviana iray manontolo.
Lee Jong-Su izay niasa tamina asa hafahafa nandritra ny fotoana nitolomany hamorona hevitra ho an'ny tantara tsy ela dia nifanena tamina vehivavy iray nihalehibe azy, Shin Hae-mi (Jeon Jong-Seo). Izy koa dia tahaka azy satria miasa amina asa tsy mety maty ho an'ny fivelomany ihany koa, saingy faly izy mahita an'i Jong-su indray, ary avy eo dia manomboka milay izy roa. Manana namana mpandraharaha manankarena antsoina hoe Ben (Steven Yeun) izy. Mahatsiaro hafahafa i Jong-su momba an'i Ben, izay nanintona an'i Hae-mi. Mampiroborobo ny saina ny fandoroana. Sarimihetsika Netflix izay mamela ny mpijery hieritreritra ela be aorian'ny fiafarany.
Rehefa manomboka ny Ady lehibe II, dia lasa nankany Krakow, Polonina, ilay mpandraharaha Oskar Schindler, izay vonona tanteraka hitady vola be mandritra ny ady. Vetivety dia miditra amin'ny antoko Nazi izy mba hahazoana tombony ara-politika. Schindler dia mampiasa ny heriny ara-politika hiarovana ireo mpiasa ao amin'ny ozininy. Tsy ela dia tsapany fa tsy mitazona ny orinasany mandeha tsara fotsiny izy. Saingy, ny famonjeny ain'olona tsy manan-tsiny marobe koa.
Mudbound dia mampiseho ny atao hoe fanavakavaham-bolon-koditra sy fahantrana, mampiseho fianakaviana roa, fotsy iray, mainty iray, monina amin'ny toeram-piompiana iray ao 1940s Mississippi. Ny tompon'ny toeram-piompiana dia ny McAllans, izay nifindra tany aorian'ny nividianan'i Henry (Jason Clarke) ny tany. Miaraka amin'ny vadiny, Laura (Carey Mulligan); ary raim-pianakaviana manavakavaka, Pappy (Jonathan Banks), ny McCallans dia miasa amin'ny tany miaraka amin'ny fanampian'ny mpivarotra mainty.
Ny Meyerowitz Stories dia mampiseho fianakaviana tsy miasa iray izay, rehefa nihaona voalohany voalohany tao anatin'ny fotoana fohy, dia nanandrana namantatra ny tsy fitovizany. Ny lohan'ny fianakaviana dia Harold Meyerowitz (Dustin Hoffman), izay mpanao sary sokitra efa ela hatry ny ela ary mandany fahanterana ankehitriny amin'ny zava-drehetra. Ny zanany rehetra dia miaina eo ambany aloky ny rainy. Miezaka mitady ny asany.
9. Ho an'ny zazalahy rehetra tiako taloha (2018)
Miorina amin'ny tantara an-tsary miaraka amina lohateny mitovy. Ity sarimihetsika ity dia iray amin'ireo hira malaza indrindra amin'ny Netflix. Ny fiainam-pitiavan'i Lara Jean Song Covey dia lasa tsy voafehy tanteraka raha ny taratasim-pitiavana nosoratany ho an'ny zazalahy tiany rehetra tamin'ny fiainany dia nalefa tamin'ny mistery daholo. Ankehitriny, fantatry ny zazalahy dimy fa na efa niraiki-po tamin-dry Lara izy ireo izao ary gaga fa liana izy ireo.
10. Very ny vatako (2019)
Miorina tanteraka amin'ny tantara sambatra Happy Hand ity sary mihetsika ity izay mampiseho ny tantaran'ny tanana tapa-tanana maninjitra hifandray amin'ny vatany. Any Paris, ny tanana dia miaro ireo voromailala sy voalavo hiaraka amin'ny tompony, Naoufel. Ampian'ny fahatsiarovana an'i Naoufel sy ny fitiavany an'i Gabrielle dia manome lamosina tononkalo momba izay nahatonga ny fisarahan-tanana voalohany, raha toa kosa ny sarimihetsika dia nandoko tamim-kanto mankany amin'ny fihaonana indray.
Danielle Macdonald dia mitana ny andraikitry ny Dumplin izay misoratra anarana amin'ny fifaninanana ho an'ny reniny satria ny reniny dia mpanjakavavin'ny hatsaran-tarehy Texas taloha ary mbola mavitrika. Raha i Dumplin dia zatovo miampy habe izay tsy miraharaha izay fifaninanana hatsaran-tarehy rehetra.
Scott Pilgrim (Michael Cera) dia rocker romantika tsy misy fanantenana. Mety tsy manana asa izy izao, fa manampy amin'ny bas ho an'ny tariny izy, lavo amin'i Ramona Flowers (Mary Elizabeth Winstead) izy. Niainga i Scott mba handresy ny fony. Na izany aza, ny sakaizan'i Ramona taloha dia adala daholo ary tsy mahazaka ny fieritreretana hoe miaraka amina lehilahy hafa. Ankehitriny, i Scott dia tsy maintsy hanao ady amin'ny ex-Ramona rehetra mba hahazoana ny fony fotsiny.
13. Tantara momba ny fanambadiana (2019)
Mampiseho mpivady iray mamaritra ny antony rehetra mifankatia. Ity sarimihetsika ity dia miresaka tantaran'ny fisaraham-panambadiana. Mampiseho mpivady tonga saina amin'ny farany fa ny ho avy tadiavin'izy ireo miaraka dia samy hafa be fotsiny ary sarotra be ny fizotrany amin'izay alehany avy. Ny anjara asan'ny mpivady dia i Charlie Barber (Adam Driver) sy ny vadiny mpilalao sarimihetsika Nicole (Scarlett Johansson). Nicole te hiverina any Los Angeles izay misy asa vaovao miandry azy, fa i Charlie kosa aleony mijanona any New York.
14. Da 5 Ra (2020)
Da 5 Bloods dia mampiseho ny tantaran'ny mpitsabo amerikana amerikana afrikanina efatra izay niverina tany Vietnam taona maro taorian'ny ady hitadiavana ny taolambalon'ny mpitarika ny ekipany lavo. Ambonin'izany, na izany aza, izy ireo koa dia mitady harena milevina izay inoan'izy ireo fa navela taorian'ny ady.
Lady Bird dia iray amin'ireo sarimihetsika tena tsara. Christine as Lady Bird nolalaovin'i McPherson (Saoirse Ronan) dia manana fifandraisana tena sarotra amin'ny reniny (Laurie Metcalf). Ny renin'i Lady Bird dia miasa tsy an-kijanona mba hitazomana ny fianakaviany aorian'ny fahaverezan'ny asany ny vadiny, Saingy, te-hiala amin'ny oniversite any Atsinanana i Lady Bird.
16. Miverina amin'ny ho avy (1985)
Michael J. Fox dia nitana ny andraikiny tamin'ny naha Marty McFly, zatovo iray izay ny sakaizany akaiky indrindra, Dr. Emmett 'Doc' Brown (Christopher Lloyd), dia nanova tampoka ny DeLorean ho milina fanamoriana ary nanjary nalaza be. Taorian'ny nankanesany ny famonoana an'i Doc tamin'ny taona 1985 tany ho any, dia hitan'i Marty fa voafandrika izy 30 taona talohan'izay tamin'ny taona 1955. Mba hodiany any an-trano, dia tsy maintsy nangataka fanampiana tamin'i Doc i Marty, ary koa i Marty tsy maintsy mandresy lahatra ny reniny, Lorraine (Lea Thompson), Raha hiaraka amin'ny rainy, George (Crispin Glover), raha tsy izany dia ho foana mandrakizay i Marty.
17. Ny Devoly Mandrakizay (2020)
Ity sarimihetsika ity dia nosoratan'i Antonio Campos (James White, Martha Marcy May Marlene). Ity sarimihetsika ity dia apetraka any amin'ny faritra atsimon'i Ohio sy Virginia Andrefana aorian'ny Ady Lehibe Faharoa, asehon'ny tantara i Arvin Russell (Tom Holland), izay tovolahy iray, tapa-kevitra mafy hiaro ny olon-tiany amin'ny kolikoly sy herisetra mitranga ao an-tanànany.
18. Indiana Jones sy ny Raiders of the Lost Ark
Niorina tamin'ny taona 1930, Raiders of the Lost Ark dia manaraka an'i Indiana Jones (Harrison Ford), izay profesora momba ny arkeolojia izay manjelanjelatra toy ny mpitsangatsangana, manandrana mijery ireo rava taloha, ary mandroba ny harenan'izy ireo amin'ny anaran'ny siansa. Taty aoriana, fantany fa ny Nazia dia mitady ny Vata misy ny fanekena malaza, Jones sy ny malalany Marion Ravenwood (Karen Allen) dia mankany Egypt mba hahita ny fiara voalohany.
Ny sarimihetsika Zodiac nataon'i David Fincher izay navoaka tamin'ny 2007, dia mifantoka amin'ny fijerin'ny lehilahy telo mitady hisambotra mpamono olona. Ilay mahery fo dia fantatra amin'ny anarana hoe Robert Graysmith (Jake Gyllenhaal), izay mpanao sariitatra an'ny San Francisco Chronicle, izay manandrana mamaky ny hafatra nalefan'ilay mpamono olona ho an'ny tonian-dahatsoratry ny taratasy. Miaraka amin'ny fanampian'ny mpanao gazety mpanao heloka bevava Paul Avery (Robert Downey Jr.) sy ilay mpitsikilo mpamono olona David Toschi (Mark Ruffalo), i Graysmith dia nanampy tamin'ny fametahana ireo fambara navelan'ilay mpamono olona.
20. Spider-Man: mankany amin'ny andininy Spider (2018)
Spider-Man: Into the Spider-Verse dia horonantsary mihetsika malaza amin'ny taona 2018 izay manolotra anao ny Spider-Men, Women rehetra azonao angatahina. Ny sarimihetsika dia mampiseho an'i Miles Morales (Shameik Moore) izay mpankafy ny Ultimate Marvel amin'ny fahafantarana izay hitan'izao rehetra izao. Momba ny zatovo iray izay voakaikitry ny hala radioaktifa iray ary mampivelatra hery lehibe.
Ny Irlandey dia sarimihetsika izay mitovy amin'ny ankamaroan'ny sarimihetsika gangster hafa, saingy amin'ny lakile kely. Miorina amin'ny hetsika ara-tantara izany, mampiseho an'i Frank manao asa ho an'ny lehiben'ny heloka bevava Russell Bufalino (Joe Pesci) ilay sarimihetsika. Rehefa afaka roa taona dia nanakaiky ny mpitarika an'i Jimmy Hoffa (Al Pacino) i Sheeran tamin'ny naha lasa mpiambina azy izay namela azy tamin'ny toerana hafahafa. Ny Irlandey dia tantara an-tsehatra momba ny heloka bevava.
22. Dolemite no anarako (2019)
Dolemite Is My Name, Murphy dia milalao ny toetran'i Rudy Ray Moore, izay mpitendry mozika izay nanova tanteraka ny tenany ho Dolemite 70 taona. Iray amin'ireo andraikitra mampientanentana sy mampihomehy eran'izao tontolo izao nataony io.
Momba ny vehivavy tsotra io. Rom dia mampiseho an'i Cleo (Yalitza Aparicio), mpanampy an-trano miasa ao amin'ny ankohonan'ny dokotera manankarena, Antonio (Fernando Grediaga), sy ny vadiny, Sofia (Marina de Tavira). I Cleo no mikarakara ny trano sy ny ankizy ary mitazona ny ankohonany hihazakazaka rehefa manomboka mampiseho olana ny fanambadian'i Antonio sy Sofia. Ity sarimihetsika ity dia maneho ny asany isan'andro sy ny tolony amin'ny fitondrana vohoka tsy ampoizina sy ny olon-tiana tsy azo atokisana.
Ity sarimihetsika ity dia manaraka litera samihafa amin'ny alàlan'ny teti-dratsy izay mampiseho ny lohahevitr'olombelona. Miovaova be ny tantara. Manaraka an'i Buster Scruggs (Tim Blake Nelson), zanak'omby mandeha mandehandeha any Andrefana. Ao amin'ny tantara iray hafa aseho azy, mitady ny fananany ny mpitady irery (Tom Waits).
25. Monty Python sy ny Holy Grail (1975)
Mampiseho an'i King Arthur (Graham Chapman) sy ireo mpanaraka azy izay misy an'i Lancelot (John Cleese), Bedevere (Terry Jones), Galahad (Michael Palin), ary Patsy (Terry Gilliam) izay handeha hitady ny Grail Masina. Ny iraka ampanaovin-dry zareo azy ireo dia mamakivaky seho hafahafa isan-karazany, ao anatin'izany ny duel manohitra ny soavaly izay tsy mahalala hoe rahoviana no hiantsoana azy io ary fihaonana amin'ny bitro mahafaty.
Amin'ny faha-27 taonany, Frances dia mpandihy fatratra izay manao fanazaran-tena ao amin'ny studio izay toa tsy dia mitady azy loatra. Mipetraka miaraka amin'ny sakaizany akaiky indrindra izy, i Sophie (Mickey Sumner) mahomby kokoa. Na izany aza, nanapa-kevitra ny hifindra tany amin'ny efitranony nofinofisiny i Sophie, namela an'i Frances hieritreritra izay hataony manaraka. Mikisaka etsy sy eroa i Francesa, rehefa sahirana amin'ny fananganana ny fiainany manokana.
Lou Bloom (Jake Gyllenhaal) dia tovolahy iray maniry fatratra ny hahita asa any Los Angeles Nanohy ny diany tao amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety momba ny heloka bevava i Lou Bloom (Jake Gyllenhaal) taorian'ny nahitany vondron'olona ekipa fakantsary tsy miankina, izany no antony ahafantarana azy hoe Nightcrawler. Nanomboka nahita ireo niharam-boina i Lou ho toy ny tantarany momba ny heloka bevava hafa.
Ravenous dia manomboka taorian'ny aretina tampoka nahazo ny ankamaroan'ny Quebec, namadika ireo niharan'izany ho biby goavambe mihinana nofo. Mampiseho ireo sisa velona izay nifamotoana hiady. Horonantsary mampihoron-koditra io. Ny lohalaharana lehibe indrindra dia ny lehilahy iray antsoina hoe Bonin (Marc-Andre Grondin), izay mandeha any ambanivohitra, mahita ireo sisa velona ary mamono zombie.
Izy io dia momba ny mpanao vatosoa mpidoroka filokana izay mahery vaika. Howard Ratner (Adam Sandler) dia mpanao firavaka New York City izay mailo hatrany amin'ny tanjona lehibe manaraka. Rehefa liana amin'ny soatoavina vao haingana nataon'i Howard, All-Star Kevin Garnett, izay inoany fa mitondra vintana ho azy i Sandler, dia nanao andiany avo lenta.
Tompon'ny klioba, Darcy Banker (Patrick Stewart), dia hanao zavatra rehetra hiarovana ny orinasany sy ny filaminany. Na eo aza ny fisehoana, ny efi-trano Green dia sary mihetsika mainty sy mampiahiahy amin'ny fomba tokony hisian'ireo mpampientanentana ary mampiseho fampisehoana mahatalanjona avy ao anaty tranony.
Pan's Labyrinth dia horonantsary mampalahelo. Nahazo mari-pankasitrahana telo an'ny Academy taorian'ny nanendrena azy enina. Tao aorian'ny ady an-trano Espaniola dia mampiseho zazavavy kely an-tsaina mety ho andriambavy amin'ny fanjakana ambanin'ny tany ny sarimihetsika. Ofelia (Ivana Baquero) dia mampiala voly ny tenany any ambanivohitra Espaniola. Rehefa sendra labyrintam-bato notarihin'i faun mampiahiahy antsoina hoe Pan (Doug Jones) izy dia nangatahana izy hamita asa telo hanaporofoana fa izy ilay andriambavy angano, izay niverina hamerina ny fanjakany.
32. Lalao Gerald's (2017)
Ny mpivady Jessie (Carla Gugino) sy Gerald Burlingame (Bruce Greenwood), izay manantena ny hanjaka amin'ny fitiavany, dia miala sasatra mankany amin'ny trano farihy lavitra. Gerald dia te-hanandrana zavatra hafa ary mamatotra an'i Jessie eo am-pandriana izy, saingy taorian'ny fifamaliana dia maty tampoka noho ny aretim-po izy, ary namela an'i Jessie nafatotra tsy nisy fanampiana teo akaiky teo. Rehefa taitra ny hatairany dia sahirana nitsoaka i Jessie.
33. Mieritreritra zavatra mifarana aho (2020)
Ity tantaran'ny sarimihetsika ity dia mampiseho tovovavy iray amoron-dàlana mankamin'ny tranon'ny ray aman-dreniny vaovao. Rehefa tonga any izy dia hitany fa ny ray aman-dreny (Toni Collette, David Thewlis) dia hafahafa loatra ka tsy azo atao. Hafahafa ihany koa ny zava-drehetra momba ny trano.
34. The Invitation (2015)
Will (Logan Marshall-Green) dia mianatra ao amin'ny The Invitation fa ny sakafo hariva miaraka amin'ny taloha dia mety ho nofy ratsy tokoa. Ny sarimihetsika dia mampiseho an'i Will sy ny sakaizany Kira (Emayatzy Corinealdi) mitondra fiara mankany amin'ny tranon'ny vadiny taloha (Tammy Blanchard) vadiny, izay nanaovany lanonana fisakafoanana miaraka amin'ny vady vaovao David (Michiel Huisman). Manome fahatsiarovana taloha an'i Will ratsy izany, ary mihodina hafa ny alina.
Ao amin'ny sarimihetsika The Lobster, taorian'ny fisaraham-panambadiana ny vadin'ny mpitarika, David (Colin Farrell) dia nankany amin'ny fialan-tsasatra ahafahan'ny olona tokan-tena mifangaro sy mitady vady. Satria mitady olon-tiana i David, dia tsy maintsy manaiky persona mihamitombo hatrany izy.
Ity tany am-boalohany Netflix ity dia mampiseho an'i Mija (Seo Hyun), tovovavy koreana tatsimo tanora iray izay nanompo an'i Okja nandritra ny folo taona teo ho eo. Okja dia biby goavambe, toy ny kisoa. Rehefa naka an-keriny an'i Okja ny Mirando Corporation ary nitondra azy tany New York, dia nanomboka nanao drafitra lehibe ho an'i Okja ny Tale Jeneraly Lucy Mirando (Tilda Swinton). Tetikasa izay tsy hankasitraka an'i Okja. Niainga i Mija hamonjy an'i Ojka, hihaona amin'ny olona samihafa toa ny kapitalista, mpanao fihetsiketsehana ary mpanjifa, izay liana manokana amin'i Okja.
37. Masoandro mandrakizay an'ny saina tsy misy pentina (2004)
Ao amin'ny Eternal Sunshine of the Spotless Mind, i Carrey dia milalao an'i Joel Barish, izay lehilahy nahatsikaritra fa ny sakaizany taloha Clementine (Winslet) dia nahatadidy ny fahatsiarovany ny fifandraisan'izy ireo taloha tamin'ny alàlan'ny fomba fanandramana izay nataon'ny Dr. Mierzwiak (Tom Wilkinson ). Miezaka mamaha izany i Joel. Fa taty aoriana dia tsapany fa tsy izany mihitsy no notadiaviny.
38. Ary ny reninao koa (2001)
Ity sarimihetsika ity dia miresaka momba ny tanora roa, Julio (Gael García Bernal) sy Tenoch (Diego Luna), izay lasa nandao ny sakaizany hanao vakansy fahavaratra any Eropa. Samy mihaona amin'i Luisa ireo tovolahy, izay vehivavy antitra ary vadin'ny zanak'olo-mpiray tam-po amin'i Tenoch, dia manasa azy ireo amin'ny dia an-dalambe mankeny amoron-dranomasina noforonina antsoina hoe Heaven's Mouth. Rehefa avy nahalala ny fivadihan'ny vadiny dia vonona hiatrika ny tolotr'izy ireo izy. Teny an-dalana dia mizara tantara sy mifankahalala akaiky izy telo mianaka. Sarimihetsika momba ny fitomboana izany.
39. Ilay mpamosavy (2015)
Tamin'ny taonjato faha-17 dia nanomboka ny horonantsary rehefa noroahina hiala ny tanàna misy azy i William (Ralph Ineson), noho ny tsy fitovian-kevitra. Manangana trano eo amoron'ny ala maizina izy ireo. Indray andro raha mbola niambina an'i Samuel i Thomasin, dia nisy zavatra nanintona ilay zaza, izay nitondra azy tany anaty ala. Rehefa miady amin'ny fisiany ny fianakaviana dia miparitaka ny ratsy any anaty ala, mandrahona ny hamono azy ireo. Ny mpamosavy dia tantara mahatsiravina.
40. Shadow (2018)
Manomboka ny horonantsary rehefa resy tamin'ny duel iray ny komandà Ziyu (Deng Chao) niaraka tamin'ny komandy fahavalo Yang Cang (Hu Jun), rehefa namoy tanàna izy, tsy ela dia nanandrana fatratra haka ny tanàna izy.
Puppeteer Craig Schwartz (John Cusack) dia manana olana ara-bola, ka dia mandray asa temp ao amin'ny biraon'ny birao izy. Indray andro, sendra nahita varavarana kely tsy nahy izy, fantany fa ny varavarana dia mitondra mankany amin'ny foiben'ny sain'i John Malkovich, kintan'ny sarimihetsika ho Con Air, The Killing Fields. Tsapan'i Craig fa rehefa miditra eo am-baravarana izy, dia mety ho lasa Malkovich mandritra ny fotoana maharitra.
42. Ny tambajotra sosialy (2010)
Malaza be izao ny Facebook, fa raha tsy fantatrao dia avelao izahay hilaza aminao fa taloha, hevitra kely mampiady hevitra tao an-dohan'ny mpianatra Harvard io. Na, lohan'ny mpianatra Harvard sasany. Ny tambajotra sosialy dia mampiseho ny tantaran'ny niakaran'ny Facebook avy amin'ny Idea fotsiny mba ho lasa tranonkala media sosialy malaza indrindra tamin'ny fotoana rehetra.
Netflix dia lasa maherifo ao amin'ity sary mifono hetsi-panoherana ity momba ny fikambanana miafina tsy mety maty izay niaro ny tany tsy ho lany tamingana nandritra ny taonjato maro. Saingy rehefa tafatsangana amin'ny iraka vonjy maika izy ireo, dia miharihary amin'izao tontolo izao ny heriny. Ankehitriny, tsy maintsy miara-miasa izy ireo mba hahazoana antoka fa tsy misy na iza na iza amin'ireo tombontsoa mifaninana matanjaka afaka mifehy azy ireo hahazoana tombony manokana na vola.
Mampanantena anao hampiala ny tavy ity sarimihetsika ity. Mandy Moore dia milalao zazavavy tsara izay raiki-pitia amin'ny zatovo maditra taorian'ny nanendrena azy hampianatra azy. Tantaram-pitiavana izany ary tena hatolotray izany.
Ity sarimihetsika ity dia mampiseho mpianatra adolantsento mahatsiravina izay, taorian'ny nahazoany diplaoma, dia nandany ny ankabeazan'ny fiainany tao amin'ny efitranony, mandra-panaon'ny lisitry ny lisitry ny zavatra tokony hatao azy.
46. ​​Devoly mahafatifaty (2016)
Ity sarimihetsika ity dia mampiseho zazalahy kely amin'ny sekoly kilasimandry misy fanatanjahan-tena izay manomboka mihodinkodina ny vintana rehefa mifamatotra tsy ampoizina amin'ny mpilalao rugby kintana an-tsekoly izy.
Alex dia ao amin'ny triangle fitiavana azy. Saingy, amin'ity indray mitoraka ity, tsy afaka manapa-kevitra eo amin'i Claire izy, izay sakaizany akaiky indrindra na zazalahy antsoina hoe Elliot.
48. Mandrapihaona omaly (2019)
Horonantsary tanora misy dia kely dia kely ity. Mpianatra amin'ny sekoly ambaratonga faharoa roa no manaparitaka ny fahaizany mivezivezy amin'ny fotoana, satria ny iray amin'izy ireo dia mampiasa azy io hanandramana sy hanovana hetsika mampivadi-po izay nitranga taminy taloha, ary misy vokany ankehitriny.
49. Ny Fahafatesana sy ny Fiainan'i Marsha P. Johnson (2017)
Izy io dia momba an'i Johnson, mpanjakavavy dragona fanta-daza sy andrin'ny fikatrohana LGBT, izay maty tamin'ny taona 1993. Nahita nitsinkafona tao amin'ny Reniranon'i Hudson ny fatiny, ary nihevitra ny polisy fa raharaha famonoan-tena ity, tantara maro izay nahafantatra an'i Johnson niahanahana. Ny ampahany manaraka dia mampiseho an'i Victoria Cruz mpikatroka mafana fo rehefa mitady porofo hanokafana indray ny raharahan'i Johnson, fa ny fanadihadiana dia tsy tantara mitantara heloka be vava fotsiny.
Taorian'ny famonoana fanandramana nanafanana eran-tany tsy nahomby dia namono ny ankamaroan'ny fiainana teto ambonin'ny planeta, ireo sisa velona eran'izao tontolo izao an-tsambo Snowpiercer, izay lamasinina mitety an'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny motera mihetsika maharitra. Fa rehefa lasa ny ankamaroan'ny olona, ​​ny kalitaon'ny fiainana dia manana fahasamihafana betsaka eo amin'ireo manankarena eo alohan'ny fiaran-dalamby sy ireo mahantra ao ambadika. Vetivety dia nanomboka nipoitra an-tsambo ireo hafatra goavam-be, nanomboka nikomy ireo mpandeha sahirana, nanipy ny lamasinina nankany amin'ny loza iray.
Ireto misy sarimihetsika tsara indrindra 50 amin'ny Netflix azonao jerena. Ireo sarimihetsika rehetra ireo dia azo jerena amin'ny taona rehetra. Manana lisitr'ireo sarimihetsika mampihoron-koditra, tantaram-pitiavana, ary hatsikana koa izy io. Manantena izahay fa ity lahatsoratra ity dia nanampy anao hahita sarimihetsika 50 tsara indrindra amin'ny Netflix.
Sarimihetsika tsara indrindra 50 hijerena horonantsary voalohany
Ahoana ny fampiasana Discord amin'ny Xbox One?
Takelaka tsara indrindra hijerena sarimihetsika - Fampiasa indrindra (2020)
Ahoana no fomba handefasako chromecast avy amin'ny solosainako
rindrambaiko maimaim-poana tsara indrindra amin'ny fanaovana mozika
kissanime mijery anime amin'ny kalitao avo lenta
kaody roblox ho an'ny mozika boombox
aiza no ahafahako mijery sarimihetsika maimaim-poana nefa tsy misintona na misoratra anarana
ampitahao ny hulu sy ny sling tv
nordvpn 30 andro hiverina